अबको पर्यटनको सम्भावना र चुनौतीः अब के गर्ने ? – Tourism News Portal of Nepal
अबको पर्यटनको सम्भावना र चुनौतीः अब के गर्ने ?
सुर्दशन न्यौपाने, पर्यटन व्यवसायी
चिन मा कोभिड 19 महामारी को रुप म फैलदै गर्दा विश्व ले यो भाईरस ले यती डरलाग्दो विश्वब्यापी रुप लेला भन्ने आकलन हामी कसैले गर्नै सकेनौ । विश्व अर्थतन्त्र लाई जेरो ग्राउन्ड मा ल्याउने खालको तबाइ यो महामारी ले ल्याएको छ । विश्व का राजनैतीक, आणबिक र बाणिज्य बादसाह हरु कोरोना नामक सुश्म भाईरस अघी नतस्तक छन । विश्व को अर्थतन्त्र लाई साम दाम दंद र भेद ले आफ्नो मुठ्ठी मित्र कैद गर्ने एकाअधिकार पूजिबादि साम्रज्यबादी देश हरु नाथे भाईरस को मुठ्टी भित्र महिनौ देखी नजरबन्द मा छन । न्युयोर्क, मस्को, पेरिस, लंडन जस्ता कहिल्यै ननिदाउने सहर कयौ दिन देखी कोमा को बिरामी झै लम्पसार छन ।
विश्व जनसङ्ख्या को ७० प्रतिशत बेरोज्गार हुने सम्भावना छ । यो ज्यानमारा भाईरस को अन्त्य अनिश्चित छ भन्ने कुरा ठुला राष्ट्र हरु र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन को बारम्बार को भनाइ ले प्रस्ट हुन्छ । विश्व महिनौ घर भित्रै कैद भै रहन सक्दैन । मर्न भन्दा बौलाउन राम्रो भनेझै अब केही महिना मा विश्व मानब जाती ले कोरोना महामारी बिरुद्ध अबज्ञा गर्ने छन । हामी नेपाली पनि सधैं घर भित्र अड्किएर बस्ने छैनौ ।
सचेतना पूर्वक कोरोना बिरुद्ध प्रतिबाद गरिने छ । यस्तो अवस्था मा हामी आम पर्यटन ब्यबसायी कसरी अघी बढ्ने रु के के हुन पर्यटन मा हामी सर्भाइभल हुँदै रिभाइभल को मार्ग मा अघी बढ्ने उपाए हरु हो त्यस्को आधार हरु खोजी गरी हाल्नु पर्छ रु नेपाल आर्थिक रुप ले तङ्ग्रिने सबै भन्दा अचुक हतियार भनेको पर्यटन नै हो तर अब को हाम्रो पर्यटन कतचबतभनथ परम्परागत हुन सक्दैन ।
हाम्रो मा सगरमाथा छ गोरे न आए कहाँ जान्छ त रु हाम्रो देश मा लुम्बिनी छ यहाँ न आए कहाँ होर जाने रु हाम्रो देश मा पशुपती छन न आई सुख रुअनी हाम्रो मा एक सिँघे गैंडा छ ति गोरा हामी कहाँ न आए कता जाओस भनेर भाग्य को फेरो समाएर बस्ने दिन अब गए । उत्पादन , नयाँ खाले प्रमोसन र एग्रेसिभ बजारिकरण को बाटो समाएन भने हाम्रो पर्यटन बजार कहिले पनि न उठ्ने गरी सुत्ने छ । दुई चार वटा पाच तारे होटेल, एक दुई दर्जन मल्टी क्विजिन रेस्टुरा, दुई चार आन्तरिक र बाहिय जहाज चलाएर पर्यटन चलाएमान हुँदैन ।दुई चार बाट पाच तारे होटेल, रेस्टुरा र रिजोर्ट त कमिसन खोर र दलाल ले मनोरन्जन र डिलिङ पोइन्ट कै रुप मा पनि त चल्न सक्छ चलिरहेकै हो नि ।
के पर्यटन इन्डस्ट्री भनेको यति मा नै सिमित हुने हो र रु पर्यटन उद्ध्योग बन्न कम्ती मा पनि हाम्रो जनसन्ख्या को एक चौथाइ हाराहारी मा पर्यटक तान्न सक्न पर्छ । हिजो जस्तो पौल्ट्री ले पर्यटन भन्दा धेरै अर्थतन्त्र मा योगदान दिएको भन्ने खाल को सतही मुल्यङ्कन र हल्का टिप्पणी गरिनु हुन्न । पर्यटकहरु ले अन्डा र मासु खएरै पोल्ट्री फस्टाएको भुल्न हुँदैन । आन्तरिक र बाहिय पर्यटन को कारण ले ह्याचरी, पोल्ट्री, डेरी, फ्लोरिकल्चर र कृषि मा घुमाउरो योगदान भुल्न हुँदैन ।
उत्पादन को अन्तर सम्बन्ध र योगदान भुल्नु र सोही अनुसार अबधारणा बनाउनु राज्य को बुद्धिमता हुँदै होइन । पर्यटक को कारण बाट पनि कृषि को ब्यबसायिकरण भएको कुरा भुल्न हुँदैन, दशौ हजार मेघा वाट को बिद्युत उत्पादन को खपत गर्न पनि पर्यटक चाहिन्छ चाहिन्छ । अब हरेक उत्पादनहरु लाई पर्यटन सँग इन्टिग्रेट गर्नु अब को आबस्यक्ता हो । पर्यटन मात्र यस्तो उद्ध्योग हो जहाँ आयत सुन्य प्राय हुन्छ । बिना कच्चा पदार्थ असीमित उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन लाई प्राङ्गरिक कृसी सङ्ग जोडौ
संसार भर प्राङ्गरिक खाना ९ अर्गानिक खाना ० को माग र महत्व बढीरहेको छ । केमिकल फर्टिलाइजर र पेस्ट्रिसाइज गरेको तरकारी, सब्जी, फलफुल र अन्न ले निम्त्याएको गम्भिर रोग ले मानिसहरु महङ्गो मुल्य तिरेर प्राङ्गरिक खाना खाने प्रचलन बढ्दो छ । हो यही मौका मा बिदेश मा कृषि मजदुर को रुप मा कार्यरत कयौ जनशक्तीहरु नेपाल आउने तरखर मा छन । ति श्रम को महत्व बुझेका जनशक्ती लाई ब्यबस्थापन गर्नु राज्य को दायित्व पनि हुन्छ । ठीक यही समय मा यस्ता जनशक्ती लाई आबस्यक जमिन र थोरै आर्थिक सहयोग दिएर प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन मा प्रेरित गराउनु पर्छ ।
फ्री रेन्ज चिकेन, पोर्क, खसी बोका टर्की र किवी पालन आन्तरिक र बाहिय पर्यटक लाई आकर्शन गरी अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन सकिन्छ । बिगत मा नक्कली कृषक बनेर सरकारी सहयोग र सुबिधा को दुरुपयोग् गरेकाहरु बाट हर्जना सहितको असुली गरी वास्तविक कृषक लाई उक्त सहयोग दिन चुक्न हुन्न । यसरी उत्पादिन तरकारी, फलफुल र खाध्यान्न बिदेश मा निर्यात गर्ने र उक्त उत्पादन मा रमाउन नेपाल मा पर्यटक आउने सम्भावना धेरै छ । भारतीय र चिनिया नागरिक लाई मात्र अर्गानिक खाना खान तान्न सकियो भने प्रयाप्त हुन सक्छ । पाश्चात्य नागरिक हरु हाम्रो अर्गानिक फार्म अबलोकन गर्न लस्कर लाग्ने मा दुइमत छैन ।
दुई चार बाट पाच तारे होटेल, रेस्टुरा र रिजोर्ट त कमिसन खोर र दलाल ले मनोरन्जन र डिलिङ पोइन्ट कै रुप मा पनि त चल्न सक्छ चलिरहेकै हो नि । के पर्यटन इन्डस्ट्री भनेको यति मा नै सिमित हुने हो र रु पर्यटन उद्ध्योग बन्न कम्ती मा पनि हाम्रो जनसन्ख्या को एक चौथाइ हाराहारी मा पर्यटक तान्न सक्न पर्छ । हिजो जस्तो पौल्ट्री ले पर्यटन भन्दा धेरै अर्थतन्त्र मा योगदान दिएको भन्ने खाल को सतही मुल्यङ्कन र हल्का टिप्पणी गरिनु हुन्न । पर्यटकहरु ले अन्डा र मासु खएरै पोल्ट्री फस्टाएको भुल्न हुँदैन ।
आन्तरिक र बाहिय पर्यटन को कारण ले ह्याचरी, पोल्ट्री, डेरी, फ्लोरिकल्चर र कृषि मा घुमाउरो योगदान भुल्न हुँदैन । उत्पादन को अन्तर सम्बन्ध र योगदान भुल्नु र सोही अनुसार अबधारणा बनाउनु राज्य को बुद्धिमता हुँदै होइन । पर्यटक को कारण बाट पनि कृषि को ब्यबसायिकरण भएको कुरा भुल्न हुँदैन, दशौ हजार मेघा वाट को बिद्युत उत्पादन को खपत गर्न पनि पर्यटक चाहिन्छ चाहिन्छ । अब हरेक उत्पादनहरु लाई पर्यटन सँग इन्टिग्रेट गर्नु अब को आबस्यक्ता हो । पर्यटन मात्र यस्तो उद्ध्योग हो जहाँ आयत सुन्य प्राय हुन्छ । बिना कच्चा पदार्थ असीमित उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
संसार भर प्राङ्गरिक खाना ९ अर्गानिक खाना ० को माग र महत्व बढीरहेको छ । केमिकल फर्टिलाइजर र पेस्ट्रिसाइज गरेको तरकारी, सब्जी, फलफुल र अन्न ले निम्त्याएको गम्भिर रोग ले मानिसहरु महङ्गो मुल्य तिरेर प्राङ्गरिक खाना खाने प्रचलन बढ्दो छ । हो यही मौका मा बिदेश मा कृषि मजदुर को रुप मा कार्यरत कयौ जनशक्तीहरु नेपाल आउने तरखर मा छन ।
ति श्रम को महत्व बुझेका जनशक्ती लाई ब्यबस्थापन गर्नु राज्य को दायित्व पनि हुन्छ । ठीक यही समय मा यस्ता जनशक्ती लाई आबस्यक जमिन र थोरै आर्थिक सहयोग दिएर प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन मा प्रेरित गराउनु पर्छ । फ्री रेन्ज चिकेन, पोर्क, खसी बोका टर्की र किवी पालन आन्तरिक र बाहिय पर्यटक लाई आकर्शन गरी अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन सकिन्छ । बिगत मा नक्कली कृषक बनेर सरकारी सहयोग र सुबिधा को दुरुपयोग् गरेकाहरु बाट हर्जना सहितको असुली गरी वास्तविक कृषक लाई उक्त सहयोग दिन चुक्न हुन्न ।
यसरी उत्पादिन तरकारी, फलफुल र खाध्यान्न बिदेश मा निर्यात गर्ने र उक्त उत्पादन मा रमाउन नेपाल मा पर्यटक आउने सम्भावना धेरै छ । भारतीय र चिनिया नागरिक लाई मात्र अर्गानिक खाना खान तान्न सकियो भने प्रयाप्त हुन सक्छ । पाश्चात्य नागरिक हरु हाम्रो अर्गानिक फार्म अबलोकन गर्न लस्कर लाग्ने मा दुइमत छैन ।
पर्यटनलाई प्राकृतिक चिकित्सा र आरोग्यसँग जोडौं
अहिले यलोपेथी बाट उपचार पछी को असर को कारण मानिस हरु प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्बेदिक चिकित्सा, ध्यान र योगा तिर आकर्शण बढ्दो छ । नेपाल प्रचुर औषधी युक्त जडिबुटी हरुको भुमी नै । त्यसैले जडिबुटी उत्पादन प्रसोधन को लागि राज्य ले सहजता र प्रबर्धन गर्न सक्नु पर्छ । आयुर्बेदिक औषधी, सौदर्य को सामाग्री ९ फेसियल प्याक, क्रिम ० उत्पादन मा जोड दिने, ध्यान र योगा केन्द्र खोली स्वदेशी र बिदेशी पर्यटक लाई उपचार गर्ने प्रकृतिक उपचार को देश को रुप मा स्थापित गर्दै लानु पर्छ ।
विश्व भर प्रचुर मात्रा मा माग भैरहेको जडिबुटी कच्चा पदार्थ निर्यात गरी मनग्गे पैसा कमाउन सक्छ । योग र ध्यान ले स्वयम देश बासी निरोगी र सबल बन्ने छन । यि माथि उल्लेखित कार्य सुरु गर्न केही समय लाग्न सक्छ त्यसैले तत्काल को लागि पर्यटन क्षेत्रको लागि राज्य ले के गर्ने के गर्ने रु पर्यटन ब्यबसायी अहिले मुर्छित छन । भए भर को जाय जेठा, श्री सम्पत्ति बैक मा राखेर सामान्य, मध्यम र उच्च खाल को लगानी पर्यटन मा गरेका ब्यबसायी भुकम्प पछी बामे सरिरहेकै बेला कोरोना ले उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन ।
नाफा कुरा छाडौ बैक को लोन ब्याज कसरी तिर्ने रु घर भाडा के गरी बुझाउने रु बन्द ब्यबसाए बिर्सन सकिदैन । सास रहुन्जेल आस भनेझै आफ्नो कार्यालय, रेस्टुरा र होटेल को सटर कहिले र कसरी खोल्ने पिरलो ले मानसिक रुपले बिछिप्त हुने अवस्था मा पुगेका छन । कसरी घर चलाऊने भन्ने चिन्ता त्यतिकै छ । घर जग्गा मा लगानी गर्ने हरु ले व्क को पाच बनाए तर अरु लाई पनि रोजगार दिन्छु अनी थोरै आफु पनि कमाउछु थोरै कर पनि तिर्छु भन्ने ब्यबसायी सबै भन्दा मर्का मा छन । हो यही बेला हो राज्य छ भन्ने अनुभुती गर्ने ।
शाहज बेला त आँफै ले गर्ने हो आपत बिपत मा चाहिने हो सरकार १ त्यसैले बर्सौ देखी मनग्गे पैसा जमाएका कमाएका बैक सँग सम्वनय गरी ब्याज मा सहुलियत् र किस्ता केही समय को लागि पोस्ट्पोन्ड गराउन सरकार ले भूमिका खेल्नै पर्छ । ट्राभल्स र ट्रेकिङ एजेन्सिज को लागि ब्यबस्था भएको बिद्यामान धरौटी खारेज गरिदिए उक्त बैक मा फ्रिज भएको पैसा आँफै मा ठुलो राहत हुन सक्छ । घर भाडा मा ब्यबसाए सन्चालन गरेका को हक मा कम्ती मा एक बर्ष हाल तिरिरहेको घरभाडा मा ५०५ छुट दिन घर वला लाई निर्देश्न दिनु पर्छ । हिजो ब्यवसाय चलेको बेला छ महिना, बर्ष दिन को अचक्ली महङ्गो भाडा त बुझाएकै हो नि ।
अहिले कसरी तिर्ने रु ठीक छ घर भाडा मा दिने पनि सस्टेन हुनु पर्छ त्यसैले आधा भाडा दिदा उनिहरु लाई चल्न गाह्रो हुँदैन । यदी यो मान्य हुँदैन भने ब्यबसायी ले गरेको लगानी उचित मुल्य मा स्विकार्न् घर वला तयार हुनु पर्छ । घर बाला ले कि आधि भाडा स्विकार्न पर्छ या ब्यबसायी को लगानी सकारेर आफु लाई ब्यबसायी बनाउन सक्नु पर्छ ।
यस्तो अवस्था मा दुई पक्ष लाई समन्वय गर्न राज्य ले निश्पक्ष अबिभावक को भुमिका खेलिदिनु पर्छ । ब्यवसाय लाई पुन सन्चालन गर्न पर्यटन ब्यवसाय को हक मा उस्को लगानी को प्रकती हेरी बिना धितो सहुलियत ब्याज ९ कृषि मा झै ० को ब्यबस्था गरिदिनु पर्छ ।
त्यस पश्चात पर्यटन लाई हाम्रो दैनिकी सँग जोड्नु पर्छ । बर्तमान महामारी बाट थोरै भन्दा थोरै मानबिय क्षति भयो भने पनि पर्यटन को लागि सहज् बातावरण बन्छ । भुटान ले कोरोना मुक्त लगभग घोषणा गर्न लागि सक्यो । महामारी एक कुना बाट अर्को कुना, एक शहर बाट आर्को शहर, एक देश बाट आर्को देश अनी फिरन्ते झै घुमी रहने सम्भावना भाईरहेको बेला सामान्य जनचेतना र जाबाफ्देही सरकार को अनुभुती गराइ कोरोना छिटो भन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न सके कोरोना नियन्त्रित देश को रुपमा नेपाल को प्रचार संसार भर हुन सक्छ ।
हो हामी फेरी उठ्ने हो भने हामी पुन अनुरोध गर्छौ र भन्छौ कोरोना लगाएत कयौ रोग र महामारी ले कमजोर भएका बिदेशी हरु लाई नेपाल को स्वच्छ हावा, निर्मल ग्लासियर को पानी, किट्नासक रहित अर्गानिक उत्पादन, न्यानो र आत्मिय सत्कार सर्ब सुलभ कनेक्टिभिटी र सुलभ मुल्य मा दिन सके आफ्नै उत्पादन नभएको देश का नागरिकहरु , रोजगार गुमेका हरु , अबसर को लागि अझै केही बर्ष कुर्न पर्ने देश को नागरिकहरु को लागि नेपाल आकर्शण को थलो बन्न्ने छ ।
हाम्रो हिमाल हेरेर, हाम्रो अर्गानिक उत्पादन खाएर, हाम्रो मौलिक सस्क्रिती मा रमेर र हाम्रो अब्बल आथित्यता पाएर कम मुल्य मा जिउन पाए मात्र न्युयोर्क, पेरिस, लन्डन्, टोक्यो जस्ता अति महङ्गि सँग जुधी रहेका मानिस नेपाल आउने हुन अब का केही बर्ष । अब को केही बर्ष को पर्यटक अचाक्ली पैसा भएर आउने प्रकृति को हुने छैनन । महङ्गि छल्न र आरोग्यता प्राप्त गर्न चाहने हरु लाई नेपाल बिकल्प हिन बिकल्प को रुप मा उभ्याउनु नै तत्काल को योजना बन्नु पर्छ ।
खाडी देश र मलेसिया बाट फर्कने हजारौं युबा जनशक्ती लाई गुणस्तरीय प्राङ्गरिक कृषि मा आकर्सित गराउन निसुल्क जमिन, सुलभ र सरल ब्यजदर मा कृषि रिण र निसुल्क प्राबिधिक सहयोग को ब्यबस्था हुनु पर्छ । रसायन रहित उत्पादन हरु जस्तै साबुन, स्याप्पो, लोसन, सौदर्य को क्रिम मलम, हेल्म लगाएत शरीर र स्वास्थ्य लाई फाईदा गर्ने कपडा को उत्पादन, हस्तकला, चित्रकला का उत्पादन लाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । अन उत्पादित क्षेत्र जस्ताइ घर जग्गा मा लगानी लाई दुरुत्साहित गरिनु पर्छ ।
रोजगारी र कगकतबष्लष्दष्ष्तिथ को क्षेत्र कृषि, पर्यटन, रिकृयासन ९ योगा, ध्यान, प्रकृतिक चिकित्सा ० र जडिबुटी उत्पादन गर्न राज्य निजी क्षेत्र सँग हातेमालो गर्न र आर्थिक सहयोग ९ सहुलियत् मा रिण ० तयार हुनु पर्छ । मुनाफा भन्दा रोजगारी धेरै दिने ब्यबसायी प्रोत्साहन स्वरुप कर छुट लगाएत का सुबिधा बारे पनि राज्य ले सुच्नु पर्छ ।